Si aad u yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay: magac alan adı, martigalin ağı, iyo degel horumaray. Laakiin waa maxay magac alan adı? Waa maxay martigelinta shabakadda? Miyaanay orta ahayn mi? Waa muhiim inaad si cad ugu kala aragti duwanaato wixii ka soo kordha ka hor intaadan u dhaqaaqin abuuro iyo martigeli boggaaga koowaad.
0.1 Noocyada kala duwan ee Web sunucusu
0.1.2 Hosting Sunucusu heegan ah
1.2.2 Muuqaalka # 2: Walaki kuma raacsana Laakiin qof…
1.3 Shabakada Marti-gelinta iyo Magaca Magaca SSS
1.3.1 Dheeraad ah okumak
Inta badan ma aha, ereyga "ağ sağlayıcısı" waxa loola jeedaa shirkadda kireeya kombiyuutarkooda / server-keeda si ay u kaydiso web sitesi-kaaga oo ay bixiso internetka si ay dadka lahana isticmaali karaan faylasha ku yaal boggaaga.
Web sitesi-dhejiye – Qalabka qaab-sameynta bogga-iyo-dhicidda si loo abuuro web sitesi
E-posta martigelinta – Inaad dirto oo aad hesho emayl [E-posta ilaaliyo]
Qalabka aasaasiga ah (kumbuyuutar sunucusu) iyo softiweer (CMS, OS OS, iwm) taageero
Ereyga "ağ sağlayıcısı" badanaa wuxuu loola jeedaa server-yada martigelisa boggaaga ama shirkada martigelisa ee kireeya goobtan.
Xarun xogeed waxay noqon kartaa qol, guri, ama dhismo aad u ballaaran oo lehine qalab aan awood lahayn ama tamar dabayl ah, xiriiro xog-is-weydaarsi la’aan ah, kontaroolo deegaanka – ie. qaboojinta, xakamaynta dabka, iyo aaladaha amniga.
Tani waa sunucusu. Magaca tusaalahan: DELL 463-6080 Sunucusu. Waxay u muuqataa oo waxay u shaqeysaa sidii masaüstü-kaaga gurigaaga – balmumu yar ka weyn oo ka xoog badan.
Noocyada kala duwan ee Web sunucusu
Waxaa jira uzaktan nooc oo kala duwan oo marti-geliyaasha ah: Wadaag, Wareegga Gaarka ah ee Gaarka ah (VPS), Dedicated, iyo Cloud Hosting.
Kasta oo noocyada kala duwan ee server-yada ay u adeegsanayaan xarun lagu keydiyo web sitesi-kaaga, waxay ku kala duwan yihiin qadarka kaydinta, xakamaynta, shuruudaha aqoonta farsamada, xawaaraha sunucusu, iyo kalsoonida. Waxaan ku tusi doonaa khilaafaadka udhaxeeya VPS, wadaag, iyo dariiqa martigelinaya qaybta soo socota.
Dhiirigelin la wadaago, orta ka orta ah shabakadda internetka ayaa lagu meeleeyaa isla sunucu badan oo ah goobo badan oo lahana, illaa dhowr illaa boqolaal ama kumanaan. Caadi ahaan, dhammaan meerayaasha waxaa laga yaabaa inay wadaagaan baaxada guud ee ilaha sunucu, sida RAM iyo CPU.
Sida kharashka aad u hooseeya, içine badan bogagga intarnetka ah ee heerarka gaadiidka caadiga ah ee ku shaqeeya barnaamijka caadiga ah waxaa lagu martigeliyaa nooca noocaas ah. Martigelinta la wadaago waxaa sidoo kale tuvalet aqbalay sida heerarka soo-galitaanka marti gelinta iyada oo tuvalet baahan yahay aqoonta ugu yar ee farsamada.
Xagee laga helaa adeegyada martigelinta VPS: InMotion Barındırma, Interserver, SiteGround
Hosting Sunucusu heegan ah
Nidaam gaar ah ayaa bixisa kantaroolka ugu sareeya ee server-ka webkaaga lagu kaydiyo – Waxaad si gaar ah u kireysataa dhammaan serverka. Boggaaga (lar) waa bogga kaliya ee lagu kaydiyo serverka.
Dhibaatooyinka – Iyadoo awood weyn ay timaado … si fiican, kharash badan. Qodobbada loo yaqaan ‘Müşteriler’ waa kuwo aad u qaali ah oo waxaa kaliya lagula talinayaa kuwa u baahan kantaroolka ugu sareeya iyo waxqabadka serverka.
Waa imisa qiimaha – $ 80 / aylık iyo kor; qiimaha ku salaysan qiyaasaha adeegga iyo adeegyada dheeraadka ah.
Bir alan waa cinwaanka web sitesi-kaaga. Ka hor inta aanad samayn karin bog internet, waxaad ve bahan.
Magaca Domain ma aha wax jir ahaaneed oo aad taaban karto ama arki karto. Waa xaraf jilayaal ah oo ku siiya boggaaga aqoonsi (haa, magac, sida aadanaha iyo ganacsiyada). Tusaale ahaan magac alan adı: Google.com, Alexa.com, Linux.org, eLearningEuropa.info, iyo sidoo kale Yahoo.co.uk.
Dhamaan magacyada domain waa orta gaar ah. Tani waxay ka dhigan tahay içinde ay jiri karto oo keliya halbeegyada shabakadaha caalamka. Ma diiwaangelin kartid magac marka ay diiwaangashadaan kuwa lahana (ay maamusho ICANN).
Shakhsi ahaan, sida caadiga ah waxaan iska diiwaan galiyaa magacyadayda Magaca Kharashka oo ay marti galiyaan iyagoo bixiya adeeg bixiye kale oo kala duwan. Boggan waxaad ahhrineysaa, tusaale ahaan, waxaa lagu martiqaaday InMotion Hosting.
Taasna waxay xaqiijineysaa içinde xayiraaddu ay ku jirto gacmahayga haddii ay dhacdo balmumu kasta oo aan u jihaynayo bixiyaha martigelinta.
Way sahlan tahay inaad u guurto shirkad cusub oo marti gal ah markaad diiwaangeliso domainkaaga dhinac saddexaad. Haddii lahana, waxaad ku dabooshaa inaad sugto shirkaddaada martigalinta si aad u sii dayso domainkaaga. Tani waxay heli kartaa xeelad ah tan iyo markii ay sidoo lahana ka luntay ganacsiga martigelinta.
Muuqaalka # 2: Walaki kuma raacsana Laakiin qof…
Laakiin sug… taasi waa aniga aniga (waxaan ahay Diinsoor). Katar badan oo ka orta ah maamuleyaasha websaydhada ayaa iibsada xarkooda isla markaana ku martigaliya isla isla hal meel. Waana wax caadi ah – gaar ahaan haddii aad ku nooshahay bixiye sumcad sumcad leh oo leh rikoor ganacsi oo wanaagsan. Waa tan ra’yi ka duwan oo laga soo xigtay Twitter:
@ Jebhostingjerry arkeen boostadaagii ugu dambaysay ee aad martigelisay. mahadsanid. qoraallo yar: namecheap dhab ahaantii waxay ku hayaan haya’daha martigalinta / magac etki alanı ah, sidaa garantili waxba ma dhicin inay saameyn ku yeelato martigelinta ama domainka ama kan lahana. içinde dhab ahaantii ahaa maskax run ah (isku xiri)
– Tamar Weinberg (@tamar) 11 Ekim 2018
@WebHostingJerry maalinta dib ugu noqo, laakiin taasi waa tan ilaa markaa isbeddelay. anaga oo ah magacyada loo yaqaan’checheap ‘ayaan si qoto dheer ugu qorney markii aan abuurnay shirkad marti-galin gooni ah, ku dhawaad, magacyadeena hoosta. yol kala duwan yihiin. baba kala duwan. arag https://t.co/vNM0toRuIg
Wixii # 2 – halkan waa tilmaamaha tafaasiisha ah ee ku saabsan sida ku wareeji magacaaga alan adı Ucuz Adı. Halkan sida ve sameyn karto GoDaddy. Asal ahaan waxaad u baahan tahay inaad sameyso
Ogsoonow, sida kudhaca Beddelka Nidaamka Diiwaangelinta ICANN, etki alanları kayar maalmihii 60 maalmood ama la wareejiyay maalmihii ugu dambeeyay ee 60 lama wareejin karo. Waa inaad sugtaa ugu yaraan 60 maalmood kahor wareejinta.
Shabakada Marti-gelinta iyo Magaca Magaca SSS
Websaydh kastaa wuxuu caadiyan lahaan doonaa faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinka u gaarka ah marka la eego astaamaha, markaa waxaad u baahan tahay inaad doorato waxa ku habboon baahidaada. Si kastaba ha noqotee, kaar baa inta badan sameeya balmumu ka fiican kuwa lahana. Waxaan dhisnay nidaam kormeer oo loogu magac daray “HostScore” – waxay kuu oggolaaneysaa inaad eegto xawaaraha martigelinta websaydhka iyo isku halaynta, sidaa darteed hubi inaad tixraacdo goobtaas ka hor intaadan binalinal.
GoDaddy waa adeeg bixiyaha shabakadda. Waxay bixisaa balmumu ka badan martigelinta websaydhada sidoo lahana waxaa ku jira adeegyada magaca alan adı, amniga websaydhka, martigelinta emaylka, codsiyada websaydhada, iyo inbadan.
WordPress ve Nidaamka Maareynta Maaddada. Waxaad ka heli kartaa marti-gelinta websaydh-ku-saleysan ee WordPress ku dhawaad ​​bixiyaha adeegga adeegga marti-gelinta websaydhka.
Marka la soo gaabiyo – haa, waa suurtagal. Si kastaba ha noqotee, martigelinta websaydhkaaga si kalsooni leh waxay u baahan tahay maalgashi weyn oo xagga qalabka iyo kaabayaasha ah. Sida ugufiican uguna kalsoonida badan ee aad rabto içinde martigelintaada u noqoto, kharashka sare.
Immisa ayay ku kacaysaa içinde lagu marti galiyo degel?
Kharashaadka ku baxa martigalinta websaydhada waxaa ka orta ah websaydhka laftiisa, magaca alan adı, abuurista tusmada, naqshada garaafka, horumarinta shabakada, iyo suuq geynta. Si kastaba ha noqotee, martigelinta websaydhka lafteeda ayaa filaya inay bixiso inta u dhaxaysa 3 $ il byaii bishii oo ah marti-gelinta caadiga ah ee la wadaago. Marti gelinta VPS ayaa si aad ah kaali uga kici doonta.
Dheeraad ah okumak
Markaad abuurayso web sitesi
WordPress Şarkı Sözleri
Markaad Maareysid Web Sitesi-Kagaga
Sida Loo Guuri Karo Web Sitesi-Kagaga Martigeliye Kale
HTTPS: A’dan Z’ye SSL SSL
Bixinta: Xiriirrada xiriirka ayaa loo isticmaalaa qodobkaan. Haddii aad iibsato adoo adeegsanaya xiriiriyeyaasheyda, mumlu sameyn karaa komishan.
Si aad u yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay: dominio magac, web
คุณอยู่ที่นี่ใช่หรือไม่, Waxaad u baahan tahay saddex shay: magac domain, martigalin web, iyo degel horumaray
Hagaha Bilowga: Веб-хостинг Waa maxay? Waa maxay Domain? Farqiga udhaxeeya Magaca Domain iyo Martigeliyaha Websaydhka
Si aad v yeesho degel, waxaad u baahan tahay saddex shay: magac domena, martigalin